UPVC / CPVC Pipe Extrusion Line - China UPVC / CPVC Pipe Extrusion Line Mutengesi, Fekitori -Jwell
Mhando dzakasiyana dzemhando uye mamodheru ePVC twin-screw extruder inogona kuburitsa mapaipi emadhora akasiyana uye akasiyana masendimita emadziro.
Inonyanya kugadzirirwa dhizaini yunifomu kupurasitiki uye yakakwira kuburitsa. Extrusion molds yakaitwa yemhando yepamusoro simbi yesimbi, yemukati kuyerera chiteshi chrome yakanamirwa pamoto, kupora kurapwa, kupfeka uye ngura kuramba; ine yakazvipira yakakwira-inomhanya sizing sleeve, pombi yepamusoro mhando yakanaka;
Iyo yakakosha cutter yePVC pombi inotora chinotenderera chinokomberedza chishandiso, icho chisingade chinotsiva chinogadziriswa neakasiyana pombi dhayamita. Iine chamfering chishandiso, kucheka, chamfering, imwe-nhanho kuumbwa. Tsigira yakasarudzika online belling muchina